Mujaahid Yuusuf Ciise Talaabo Oo Ku Geeriyooday Dalka Kanya | Araweelo News Network (Archive) -
Mujaahid Yuusuf Ciise Talaabo Oo Ku Geeriyooday Dalka Kanya
Nairobi(ANN)Alla haw naxariistee Mujaahid Yuusuf Ciise Tallaabo ayaa maanta ku geeriyooday xarunta Dalka Kenya ee Nairobi, halkaas oo xaalad caafimaad loo geeyay dhowaan. Kadib markii uu mudo u jiifay xaalad caafimaad daro Cusbataalka Boorame, balse Madaxweynaha Somaliland u diray Cusbitaal
debeda ah. Sidaana loogu qaaday dhinaca dalka Kenya qiyaastii saddex todobaad ka hor.
Mudane Axmed Yuusuf Yaasiin Gudoomiye xigeenka Xisbiga UDUBw , isla markaana ah ku simaha gudoomiyaha ayaa xaqiijiyay geerida Mujaahidka.wuxuuna isagoo ku hadlaya magaca bahweynta xisbiga UDUB sheegay inuu tacsi u dirayo qoyskii qaraabadii, xisbiga Udub iyo ummada Somalilandba, isagoo ka tacsiyadaynaya geerida ku timi mujaahidkaa.
Mujaahid Yuusuf Ciise Talaabo oo ka mid ahaa mujaahidiintii Ururkii SNM ee horseedka u ahaa xoraynta Somlilland. Waxa uu xilal kala duwan kasoo qabtay xukuumadii Somaliland, isagoo noqday Badhasaabka gobolka Sanaag sagaashanaadkii. Wixii markaa ka danbeeyan wuxuu ahaa wasiir ku xigeen Wasaaradda macdanta iyo Biyaha iyo Cadaaladda oo uu labada kasoo qabtay xilal wasiir ku xigeen. Markii laga guulaystay xisbigii UDUB ee uu ka midka ahaa doorashadii 2010, wuxuu noqday gudoomiyaha garabka Siyaasada ee xisbiga Mucaaridka UDUB, xilkaa oo uu hayay ilaa waqtigan oo Mujaahidku geeriyooday.
Mujaahid 1982 ayuu ku biiray halgankii hubaysnaa ee SNM, xiligii dhaxtuurka isagoo waqtigaa ka mid ahaa macalimiintii halganka ku biiray xiliyadaa, isla markaana kaalin firfircoon kasoo qaatay halgankii iyo dib u dhiskii dalka Somaliland.
Shebekada Bahweynta Araweelonews waxay tacsi tiiraanyo leh u diraysaa Qoyskii Qaraabadii, Ehelkii iyo shacbiga Somaliland geerida ku timi mujaahidkaa. Waxayna Illaahay uga baryayaan inuu naxariistii janno ka waraabiyo marxuumkaa.